Ulo olu ọrụ
Dimple mkpọchi mgbapụta egbe
Dimple mkpọchi mgbapụta Gun (aka. Dimple Pin mgbapụta Key Gun Set) na-agụnye 10 uwa blades maka nha nke ọtụtụ isi dimple pin cylinders na otu akara nke atụdo aka nri ma ọ bụ n'aka ekpe. Enwere ike ịgbanwe ike kachasị mma nke bumps na ezigbo anya nke usoro agụba. Keykpụrụ igodo na-aga nke ọma na-adabere n'ọtụtụ ihe. Ya mere ọ dị mkpa iji mepụta ụdị ịkụ aka a tụrụ atụ nke ọma. A na-akpọ Bump Key Technology na-enyere onye ọ bụla aka imeghe ...
H&H 10 Dimple mkpọchi Ghota
H&H 10 Dimple mkpọchi Bọọ Set gụnyere 10 dị iche iche ghota ekwekọghị nke 2 dị iche iche ọkpụrụkpụ, na-gụnyere bụ abụọ erughị ala ngwaọrụ. A na-eji ahịhịa ahịhịa ahịhịa ahịhịa ahịhịa ndụ, na-adọrọ adọrọ ma sie ike, yana n'isi nchịkọta ọ bụla gụrụ 1-10 maka nzube njirimara dị mfe. Ihe gunyere: 10 di iche iche choro uzo nke 2 odi iche. 2 erughị ala ngwaọrụ abịa na a ọma adụ shei mkpọchi uwe ikpe H&H, ika nke elu mma! Usoro usoro Debanye aha gị site na email gị - Ndekọ aha m ...
HUK Uhie Red mkpọchi
HUK Red Tiger Lock Picks bụ usoro kachasị mma maka mkpochi mkpọchi izugbe, mkpọchi mkpọchi ọ bụla nwere njigide ngwongwo dị elu maka ọtụtụ ngwa. Nhọrọ a na - ahọrọ ihe ndị a na - atụnye m, mpe mpe mpe, pịịlịị, ndị na - apụnara mmadụ ihe na - enwe nsogbu. HUK Red Tiger na-enye nhọrọ nke emepụtara nke ọma ma họpụta ya maka ọkwa niile nke ikike ịchọta mkpọchi. Inwe ụdị dịgasị iche iche n'otu usoro na-eme ka nke a bụrụ ezigbo usoro izugbe. Usoro usoro Debanye aha gị na email site na email gị ...
GOSO 7 Pin Tubular Lock Bick (7.0mm, 7.5mm, 7.8mm)
GOSO 7 Pin tubular Lock Pick na-abịa na 3 iberibe nke na-eulatesomi ụdị nha atọ ị na-ahụ n'ebe ahụ n'ọhịa. Nhọrọ ọ bụla nwere ike idozi ya ka ị nwee ike ime omimi ọ bụla ịchọrọ. Nke a dị mkpa karịsịa n'ihi na oge ụfọdụ ndị nrụpụta dị iche iche ga-eji mkpọchi nke dị omimi ma ọ bụ karịa miri emi dabere na igwe ahụ. Sizesdị atọ a setịpụrụ bụ 7mm, 7.5mm na 7.8mm. Anyị na-enwe ike bulie ọtụtụ tubular akpọchi n'ime ihe dị ka 30 sekọnd. Itinye tubul a ...